नमस्कार भन्ने कि नमस्ते ? – Waikhari
गृहपृष्ठ जीवन शैली नमस्कार भन्ने कि नमस्ते ?
नमस्कार भन्ने कि नमस्ते ?
‘नमः’ को शास्त्रीय अर्थ हो–जोडिएका दुई हात निधारमा पुर्याई शिरलाई अलिकति झुकाएर गरिने अभिवादन । जसलाई सामान्यतः नमनः, प्रणाम, अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, प्रणति आदि भन्ने गरिन्छ । नमस्तेमा उत्तरोत्तर विशिष्टता थपिँदै जाँदा क्रमशः पादस्पर्श र साष्टाङ्गदण्डवत् हुन्छन् । यही नमस् पदमा तिमीलाई भन्ने अर्थ बताउने ते (सर्वनाम) जोडिएपछि नमस्ते बन्दछ । अतः नमस्तेको अर्थ हुन्छ–तिमीलाई नमस्कार । त्यस्तै नमस् पदमा भावार्थक कार जोडिएपछि नमस्कार शब्द बन्छ, यसले पनि नमनको भाव बताउँछ । यी दुवैले सामान्यतः ठुला मानिस र ईश्वरप्रति गरिने अदब, अभिवादन, सम्मान, नमस्क्रिया आदि शिष्टाचार बताउँछन् ।
नमस्ते र नमस्कारमा कुन जेठो होला भनी खोजी गर्दै जाँदा हामी वेदसम्म पुग्न सक्छौं । त्यहाँ देवतालाई अभिवादनका लागि नमस्ते शब्दको प्रयोग गरिएको पाइन्छ, जस्तै नमस्ते रुद्रमन्यव…(शुक्लय.१६(१), नमस्ते हरसे शोचिषे…(शुक्लय.३६(२०) आदि । वेदमा मात्र होइन उपनिषद्, ब्राह्मणग्रन्थ र विभिन्न पुराणहरूमा समेत देवी देवताहरूलाई वन्दना, स्तुति, अभिवादन, आराधना, प्रार्थना आदि अर्थमा जतासुकै नमस्ते सम्बोधन गरिएको पाइए पनि तत्समानार्थी नमस्कार चाहिँ एकाध ठाउँबाहेक भेट्न सकिएन । नमस्तेको यही प्राचीनता र वैदिकतालाई समातेर आर्यसमाजका अनुयायीहरू विश्वको सर्वप्राचीन, सर्वोत्तम र निर्विकल्प अभिवादन नमस्ते हो भनी तर्क गर्दछन् ।
गह्रुङ्गो भो भन्दैमा नमस्कार शब्दको प्रयोग पटक्कै हँुदै नहुने चाहिँ होइन, भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन सोनी टिभीबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्दा शुरु तथा अन्त्यमा नमस्कार भन्छन्, नेपाली टिभीका समाचार वाचकहरू नमस्कार भनेरै समाचार शुरु गर्छन् । विद्वान्हरू पनि सम्बोधनमा प्रायः नमस्कार नै प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै प्राज्ञिक र भाषाविद्हरू पनि नमस्कारलाई नै अधिकतर चलाउँछन् । यी दुईको तुलनाबाट पनि नमस्कार एवम् नमस्तेका प्रयोगकर्ता र क्षेत्र फरक छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ, अर्थात् लोक नमस्तेलाई चुस्त दुरुस्त र तन्दुरुस्त देखेर मन पराउँछ भने विद्वत्वर्ग चाहिँ नमस्कारलाई शास्त्रीय, शुद्ध तथा सात्विक मानेर प्रयोग गर्न रुचाउँछ । यी दुवैमा आ(आफ्नै तर्क छन्, दम छन्, मिठास छन् अनि सौन्दर्य छन् । लोक भन्छ– शुद्धाशुद्धि, मान–अपमान जेसुकै होस्, बुझ्नुपर्ने भाव हो, यो बुझिएकै छ, नमस्ते हजुर भन्दा कसैले पीठ फर्काएको आजसम्म पाइएको छैन भने अरूले किन विवाद गर्नु ? भाषाविद्हरू कुर्लिन्छन्– अशुद्ध उच्चारण गरेकाले वृत्रासुरले मर्नुप¥यो, त्यसैले अशुद्ध र भावदूषित शब्द पटक्कै उच्चारण नगर्नू…।
नमस्ते र नमस्कार दुवै श्रद्धाका विषय हुन् । तसर्थ लिने र दिने दुवैमा श्रद्धा छ÷छैन यो चाहिँ अधिक महत्वपूर्ण कुरा हो । लिनेले श्रद्धापूर्वक लिएन वा दिनेले पनि श्रद्धापूर्वक दिएन भने नमस्ते, प्रणाम, दर्शन, चरणस्पर्श, साष्टाङ्गदण्डवत् कुनैको पनि काम छैन । त्यसकारण नमस्ते मनोविज्ञानमा श्रद्धा बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ । अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने नमस्ते चाकडी मनोविज्ञान पनि हो । गतिशील मानिस जब कुनै अलभ्य वा दुर्लभ कुरालाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्छ तब नमस्तेलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । यसबाट हजारौं मानिसले आफ्ना इष्टदेवलाई रिझाएका पनि छन् । यहाँ नमस्ते भन्यो कि नमस्कार महत्वपूर्ण हँुदैन, श्रद्धा र चाकडी चाहिं मुख्य बन्छ ।
नमस्ते र नमस्कारमध्ये कुन प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रत्यक्षता र अप्रत्यक्षता महत्वपूर्ण छन् । देवतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा नमस्ते भनिएझैं कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई अप्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दा नमस्ते भन्न सकिन्छ । अथवा, स्नेहीजनलाई अभिवादन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि नमस्ते भन्नु राम्रो होला, तर मान्यजनलाई प्रत्यक्ष सम्बोधनमा भने नमस्कार भन्नु नै उपयुक्त हुनेछ भन्ने यस पङ्क्तिकारको ठहर रहेको छ ।